Thwebula Clean Master 5.14.6.4123 – Android – Vessoft
Thwebula Clean Master
Master Hlanza – an lula ukusebenzisa isofthiwe ukuhlanza nokwandisa uhlelo. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukuskena futhi ususe ezingenasidingo amafayela apk, isilondolozi kwezicelo, amafayela residual noma okwesikhashana kanye nezinye udoti. Master Hlanza kwenza ukuba sihlaziye izimbangela Ukushisa wokugaya, izicelo run in mode esisheshayo futhi bahlanze imemori yokusebenza ukwandisa ukusebenza DIMENSION. Isofthiwe iqukethe unqulo wesi arab esakhelwe lapho aqalaze uhlelo lwakho for the phambi izinsongo futhi ubonisa imininingwane sengozini uhlelo. Master Hlanza sihlanganisa module isipele amafayela apk, ukuhambisa izicelo imemori khadi bese ususe isofthiwe engadingeki.
Сleaning futhi iqhakambisa of the system
Mode of ukushesha of inkumbulo
Amazwana on Clean Master:
Clean Master Ahlobene software: